प्रदेश १ का १४ वटै जिल्लामा खोप वितरण सुरू
राज कुन्द्राको अफिसबाट मुम्बई अपराध शाखाले भेटायो गोप्य प्रमाण
भारतबाट चोरेर नेपाल ल्याएका सवारीसाधनसहित २ व्यक्ति पक्राउ
निर्मला पन्तको हत्यारा पत्ता लगाएर कारबाही गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
निर्मला पन्त हत्या प्रकरण, देउवा प्रधानमन्त्री बन्दा न्याय पाउने आस
वडा अध्यक्ष भुसालको कोरोनाका कारण निधन
महन्थको रिटमा सर्वोच्चबाट अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार
राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको विषयमा अश्लिल टिकटक बनाउने पक्राउ
महिनाको दोस्रो दिन सुनको मुल्य बढ्यो - जे देख्छ, त्यही लेख्छ
शुक्रवार, असोज २ २०७७
नेपाली बजारमा आज सुनको मुल्य उकालो लागेको छ ।
आइबारको तुलनामा सुनको मुल्य तोलामा ४ सय रुपैंयाले बढेको हो ।
आज छापावाल सुन प्रतितोला ९७ हजार र तेजावी सुन प्रतितोला ९६ हजार ५ सय मा कारोबार भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ ।
सुनको मुल्य बढ्दा चाँदीमा मुल्य पनि केही बढेको छ । हिजोको तुलनामा चाँदीको मुल्य तोलामा १० रुपैंया बढेर आज १३ सय २० मा कारोबार भएको महासङ्घले जनाएको छ ।
सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा असोज १ गतेदेखि सम्पूर्ण पसलहरु खोल्ने निर्णय गरेसँगै बजारमा मानिसहरुको चहलपहल बढिरहेको छ । लामो समयदेखि कारोबार ठप्प प्राय भएका सुनचाँदी व्यवसायीहरु अब कारोबार बढ्नेमा आशावादी देखिएका छन् ।
बजारमा कारोबार न्यून
कोरोना भाइरस (कोभिड १९) महामारीले गर्दा बजारमा सुनको कारोबार लगभग ठप्प प्राय रहेको छ । बजारमा सुनको गरगहना किन्ने भन्दा पनि पुराना गरगहना किन्ने मानिसहरुको संख्या बढेको सुनचाँदी व्यवसायीहरु बताउँछन् ।
ग्राहकहरुले पुरानो गहना बेच्दा ज्याला जर्ति काट्दै कम मुल्यकाङ्न गरिएको गुनासो गर्दछन् । लामो समयदेखि भएको लकडाउन र निषेधाज्ञाले गर्दा मानिसहरुको आर्थिक स्थित कमजोर भएको बेलामा सुनको कारोबार ठप्प हुनु स्वभाविक पनि हो ।
हात मुख जोर्न नै समस्या भइरहेको बेलामा सुनचाँदी बिलासिताका बस्तु बनेका छन् ।
किरणसँग नजिकिदै रमाउन थाले आमिर
सहकारीको किस्ता तिर्न नसक्दा आत्महत्या !
उपत्यकामा कोरोना सङक्रमण बढेपछि लकडाउन थप्ने तयारी
फुटबल टिमको प्रशिक्षकबाट राजीनामा दिने अलमुताइरीको घोषणा
पैसा नभएको चेक दिएर फरार भएकी निता पक्राउ
इजरायल जाने कामदारको परीक्षा मिति सार्वजनिक गर्ने तयारी !
लक्ष्यभन्दा करीब आठ प्रतिशत बढी राजश्व सङ्कलन